Sare u kaca iyo hoos u dhaca Sanbaloolshe – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Sare u kaca iyo hoos u dhaca Sanbaloolshe
Cabdullaahi Maxamed Sanbaloolshe waxa uu ahaa shaqsiyaadka ugu awoodda badan ee kasoo dhex muuqday dowladda federaalka kadib doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isaga oo saxaafadda iyo falanqeeyeyaashaba kaga yaabsaday hadal uu fagaaro ka sheegay xilli uu ka hadlayay arrinkii Qalbi Dhagax.
Wuxuu xilligaasi sheegay: “Anigoo af duubaaya dowladda, waxaan jeclaan lahaa in xitaa madaxda sare aysan ka hadlin arrinkaas”.
Islamarkii bishii April, 2017kii loo magacaabay agaasimaha hay’adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA, waxa uu la yimid qorshe loogu magac daray ‘Xasilinta Caasimadda’, waxaana la dhisay ciidammo isku dhaf ah oo loogu talagalay in ay sugaan amniga caasimadda.
Waxaa Muqdisho laga mamnuucay hubka, iyada oo dadka hubeysan lagu wargaliyay in ay hubkooda dowladda kusoo wareejiyaan, balse wuxuu ahaa go’aan uu ka dhashay buuq badan, loona fasirtay in hub ka dhigis la samaynayo iyada oo aanan la heynin wax damaanad ah oo lagu sugayo amniga dadkii hubka laga qaaday.
Awood taas la mid ah ayuu Sanbalool ku dhex lahaa dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, xilligaas oo isaga oo taliye ka ah NISA weerar lagu qaaday fariisimo ay lahaayeen ciidamo taabacsan Axmed Daaci oo ahaa guddoomiye degmo iyo Cabdiwali Qanyare oo ahaa xildhibaan, waxaana ka dhashay rabshado ay qasaaro ka dhasheen.
Sanbaloolshe waxa uu ahaa nin xitaa ka cod dheer wasiirka isaga ka daraja sareeya, markastana saxaafadda ka hadla isaga oo bixinaya amaro kulkulul, waxaana ka mid ahaa in xitaa uu mar xildhibaano uga digay in xasaanadda laga qaadi karo.
Mar la weeydiiyay sababta arrimaha NISA had iyo jeer loogu faaqido saxaafadda ayaa waxa uu sheegay “in NISA ay isugu jirto Sirdoon iyo Amni, wixii sir ahna ay dowladda u qarsanyihiin, wixii amni ahna ay tahay in bulshada ay markasta ka qeybqaadato”.
← Guddiga doorashooyinka madaxa banaan oo qabtay doorashadii ugu horeysay
Ra’iisal wasaare Khayre oo ka warbixiyay kulamo uu la soo qaatay Bankiga Adduunka →